७ बार मध्ये यी बार जन्मेका व्यक्ति हुन्छन् धेरै भाग्यमानी ! तपाईको राशि हुन हो ? हेर्नुहोस्
Homeराशिफल७ बार मध्ये यी बार जन्मेका व्यक्ति हुन्छन् धेरै भाग्यमानी ! तपाईको राशि हुन हो ? हेर्नुहोस्
हरेक व्यत्तिको जन्म सात बारे मध्ये एक दिन हुने गर्छ । सबै मानिसको जन्म कुन्डली जन्मबार र समय अनुसार निर्माण गर्ने गरिन्छ । जन्मबार र जन्मेको समय निकै महत्वपूर्ण हुने गर्छ । ज्योतिष शास्त्र अनुसार जन्मेको बारलाई ग्रहले निकै प्रभाव पारेको हुन्छ । आइतबारको दिन सूर्य ग्रहको भने सोमबार चन्द्र ग्रहको हो । ज हामी तपाईहरुलाई कुन बार जन्मेका व्यक्तिहरुले कति सम्पति कमाउँछन् भन्ने बारे जानकारी दिन गइरहेका छौँ ।
आईतबार : आइतबार जन्मने व्यक्ति निकै भाग्यमानी हुन्छन् । उक्त बार जन्मने व्यक्तिको आयु पनि लामो हुने गर्छ । कम बोल्ने भएकाले शिक्षामा समेत अब्बल हुने गर्छन् । उनीहरुले घर परिवारलाइृ खुसी राख्न निकै प्रयास गरिरेहेका हुन्छन । यो दिन जन्मेका व्यक्तिलाई २० देखि २२ वर्ष सम्मको उमेरमा निकै कष्ट हुने गर्छ । उनीहरु दान पुण्य गर्न निकै अग्रसर हुने भएकाले उनीहरुलाई २२ वर्ष पछि अत्याधिक धन लाभ हुने योग रहेको छ ।
सोमबार : बोलिमा निकै मिठास भएका व्यक्तिहरु सोमबार जन्मेका हुन्छन् । यस दिन जन्मने व्यक्तिको भागमा दुख सुख बराबर जस्तै हुने गर्छ । उनीहरुमा निकै कला गला शिक्षामा पनि अगाड हुने भएकाले बहादुर हुने गर्छन् । उनीहरुको लागि ९, १२, २७ वर्षमा निकै कष्ट बेहोर्नु पर्ने हुन्छ । सोमबार जन्मने व्यत्तिलाई श्वासप्रश्वासको रोग लाग्ने सम्भावना रहेको हुन्छ ।
बुधबार : बुधबार जन्मने व्यक्ति धर्म कर्ममा निकै विश्वास गर्ने गर्छन् । आफ्नो काममा धेरै चासो दिने भएकाले धन सम्पति कमाउन सञ्चय गर्न अरु भन्दा अगाडी रहेका हुन्छन् । यी व्यक्तिलाई ८ र २२ वर्षको उमेरमा निकै कष्ट गर्नु भएपनि जीवन सामान्य नै रहनेछ ।
बिहिवार : यो बार जन्मने व्यक्ति निके विद्यवान हुने गर्छन् । ७, १२, १३, १६ र ३० वर्षको उमेर सम्म यो बार जन्मने व्यक्तिलाई संकट पर्ने छ । ३० वर्षका उमेर कटेपछि यो बार जन्मने व्यक्तिको भाग्य फेरिने छ । उनीहरुले सोचेभन्दा बढी सम्पति कमाउने अवसर मिल्नछ ।
शुक्रबार : शुक्रबार जन्मने व्यक्ति निकै मिठो स्वर भएका हुन्छन् । उनीहरु रोमान्च स्वभावका हुन्छन् । यो बार जन्मने व्यक्तिलाई २० र २४ वर्षको उमेरमा कष्ट भोग्नुपर्ने हुन्छ ।कडा मेहनत र परिश्रम गरेबापत उनहिरुले प्रशस्त भन आर्जन गर्छन् ।
शनिबार : बाल्यकालमा कष्ट पूर्ण जीवन बिताएको भए पनि उनीहरुलाई त्यो भन्दा पछिको जविन निकै सुखद रहनेछ । आफै केही गर्ने सोच भएका कारण् यो बार जन्मने व्यक्तिहरु आफ्नो व्यापार व्यवसायमा निकै रमाउँछन् । २०, २५, ४५ वर्षको उमेर पछि यी व्यक्तिहरुले निकै समस्याहरु समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ । यीनीह्रुले प्रशस्त धन कमाउन सक्नेछन् ।